Upelo kunye neGrama Jonga ngegrama | Martech Zone
Ukuba ukhe wafunda Martech Zone okwethutyana, uyazi ukuba ndingasebenzisa isuntswana loncedo kwisebe lokuhlela. Ayikuko ukuba andikhathali ngopelo kunye negrama, ndiyayenza. Ingxaki yinto yesiqhelo. Sele kuyiminyaka ndibhala kwaye ndipapasha amanqaku ethu kubhabho. Abahambi ngamanqanaba aliqela okuvunywa- bayaphandwa, babhalwa, kwaye bapapashwa.
Ngelishwa, oko kundibangele iintloni njengoko ndipapashe into ehlekisayo Iimpazamo zegrama emveni kweminyaka. Ndide ndathetha nabanye ababhali bethu malunga nokubanako kugcino lokujonga iiposti zam yonke imihla. Nangona kunjalo, andifuni kulinda ukupapasha ngenxa yoko bendikhe ndakubeka ecaleni. Ungayichazanga eyokuba andinakukuthanda ukuba izindululo zabo ziyitshintsha njani ithoni yomsebenzi wam. Ndikuphephe ngokunyanisekileyo ukuhamba kwindlela yokuhlela. Kananjalo ndibhala amanqaku amaninzi kangangokuba kufuneka ndiphucule umyalelo wam kulwimi lwesiNgesi.
Zingaphi iimpazamo zegrama kunye nopelo ezenziwa ngabantu kwi-Intanethi?
Ayindim ndedwa! Igrama yahlalutya ngaphezulu kwamawaka ezigidi amagama kuvavanywa kwakhona ngohlelo lwabo lokubhala oludumileyo kwinyanga enye. Nantsi into abayifumeneyo:
Abantu benze i-avareji yeempazamo ezingama-39 ngamagama ali-100 kwizithuba zemidiya yoluntu. Ii-imeyile zilandela iimpazamo ezili-13 ngamagama ali-100 kunye nezithuba zebhlog zezona ziphantsi ngeempazamo eziyi-6.5 ngamagama ali-100.
Abantu banamathuba aphindwe kathathu okwenza iimpazamo kwizithuba zemidiya yoluntu kunathi nakwezinye iintlobo zokubhala kwi-Intanethi. Ndicinga ukuba ezinye zezi zinto zinento yokwenza nokusikelwa umda kwe-Twitter (akukho luhlelo) kunye nendlela yokuncokola kwimidiya yoluntu.
Iintaka zokuqala ezibhala phakathi kwentsimbi yesi-4: 00 kusasa nentsimbi yesi-8: 00 kusasa zenze iimpazamo ezimbalwa nge-18.2% kunokubhala izikhova ebusuku phakathi kwentsimbi ye-10: 00 ukuya kweye-2: 00 kusasa. (Uh-oh)
Yeyiphi eyona mpazamo yegrama kunye neempazamo zopelo Ngaba abantu bayazenza kwi-Intanethi?
Iimpazamo zeAphostrophe (umzekelo, masenze vs. vumela)
too vs. Ku
Yonke imihla vs. Yonke imihla
Pha vs. zabo
ngaphezu vs. ngelo xesha
Unokuba ubona uphuculo kule ndawo, njengoko ndityalile imali kwilayisensi yonyaka ye- Igrama, inkonzo esele ibizwa ngokuba lelona jonga lokujonga iigrama. Gcwalisa ngolwandiso lwesikhangeli, ndingabhala ngokukhawuleza kwaye ndilungise iimpazamo ngaphandle kokushiya umhleli wam.
Igrama: Eyona Igrama esemgangathweni kunye nePlatform yokujonga uPelo
Igrama yinkonzo endinokuyisebenzisa ngalo naliphi na iqonga okanye isoftware. Nantsi eminye imizekelo:
Umhleli wegrama -Umhleli weGrama uyamangalisa, ngokujonga upelo, ukukhangela igrama, ukukhangela ukukopa, izindululo zabaphulaphuli, ukujonga ubume, ukufundeka, ukufumanisa ithoni, injongo, amanqaku onke, iinjongo, iingcebiso ngamagama, ukubuyisela okuhle, ukubala kwamagama, ubude besivakalisi, nokunye okuninzi.
I-App yeDesktop yeGrama -Igrama inesicelo esizimeleyo esinokuqhuba kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza. Iqonga elisekwe kwiwebhu apho unokugcina indawo yokugcina kuwo onke amaxwebhu akho.
Igrama ye-iPad -Igrama inesicelo esizimeleyo esinokuqhuba kwi-iPad.
Ulwandiso lweSikhombisi seGrama -Igrama inezandiso ezomeleleyo zesikhangeli. Ndisebenzisa ulwandiso lweSafari ngoku ngaphakathi komhleli weWordPress 'Gutenberg ngoku kweli nqaku. Naliphi na iphepha lewebhu elinendawo yokubhaliweyo lenza ukuba iGrama ikuncede ngokuzenzekelayo. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, unokufumana ukusebenza okusisiseko ngaphandle kweendleko!
I-Grammarly Office Yongeza -I-Grammarly ine-ofisi eyongezelelweyo yeWindows okanye iMac.
Ikhibhodi yegrama -Ukuba ukwisixhobo esiphathwayo, ungafaka kwaye usebenzise ikhibhodi yeGrama ukuze uncede ikopi yakho ephathekayo.
Ishishini legrama -Ngaba inkampani yakho inezikhokelo zesitayile esithile xa ubhala? Ishishini leGrama likwenza ukuba ukhokele wonke umntu ophakathi kwenkampani yakho ukuba alandele izikhokelo zakho.
Qalisa ngegrama ngeSimahla
Uzijonga njani iigrama kunye neempazamo zopelo ngegrama
Sebenzisa iGrama ngendlela elula. Kwindawo yokubhaliweyo osebenza kuyo, uya kubona upelo kunye nemicimbi yegrama ekrwelelwe. Cofa kwi icon yeGrama kwaye uphakamise umhleli onzulu ngakumbi onalo lonke ulwazi olifunayo ukuze uphucule ikopi yakho.
Nantsi ividiyo entle ukuba isebenza kanjani iGrama:
Ukuba ezo zinto azonelanga kuwe, ungathini malunga ne-imeyile yeveki ukwazisa ukuba uqhuba kakuhle kangakanani xa uthelekiswa nabanye abasebenzisi beGrama? Ewe, bathumela enye! Kwaye, andabelani neyam.
Qaphela: Ndisebenzisa eyam Igrama amakhonkco obulungu kuyo yonke le post.
tags: izindululo kubaphulaphuliIimpazamo zopeloizixhobo zokuhlelaizixhobo zokuhlelaiimpazamo kumagama ali-100ukujonga ubumeimigomoigramausetyenziso lwegramaUkujonga igramaUmvavanyi wegramaUkuhlolwa kwegramaisixhobo segramangegramangenjongoiimpazamoamanqaku onkeukukhangela ukukopelaiziphumlisiukufundekakhangela upeloupeloupelousetyenziso lopeloUmkhangeli wopeloisixhobo sokupelaubhaqo lweethoniSigamaukubala kwamagamaiimpazamo zamagamaiingcebiso ngamagama
Iifreshsales: Ukutsala, Ukuzibandakanya, ukuVala, kunye nokukhulisa iiNkokeli zeShishini lakho kwiQonga elinye lokuThengisa
Mar 24, 2016 ngo 4:22 PM
Ndiyayivavanya ngoku. Ngaba kukho uphawu oluyixelela ukuba ingahoyi abalinganiswa be-html kwi-doc? Okwangoku, xa ndibhalela iwebhu, ndifomatha nje njengoko ndihamba kwaye igrama elungileyo iyalingana, ngakumbi xa ifika kuluhlu.
Kwaye, grr, iya kuxhasa nini iGoogle Drive?
Mar 25, 2016 ngo 5:45 PM
I-Google drive iya kuba yinto entle! Ndiyikhupha nje kwiGrammarly kuxwebhu lwam.